Factory ngwaahịa | Ndị na-emepụta ngwaahịa China, ndị na-eweta ngwaahịa
Akpa Nzipu ozi
Nkịta Poop akpa
Iko & mkpuchi
PLA Cup & mkpuchi
U Iko Cup
Achịcha Ice Ice
Osisi ịkpụ osisi
Ihe nkiri Compostable
Nri Ihe oriri
Ihe oru mmeghe
Disposable Biodegradable uwe
Ebere site na CPLA plastik, bioplastic sitere na ọka ọka, arịa ndị a nwere ike iwepu bụ 100% na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, na-eje ozi dị ka ezigbo eco-friendly ọzọ na arịa plastik ọdịnala. Site na ihe ọhụụ, nke kristalị nwere ike iguzogide okpomọkụ ruo 100 Celsius C, ụdị cutter plastik ndị a zuru oke iji jikọta nri oyi ma ọ bụ na-ekpo ọkụ n'ụlọ nri gị, ụlọ nri, ma ọ bụ nri. Njirimara ebe dị larịị, arịa ndị a CPLA na-agbasi mbọ ike imeju ihe ndozi na ntọala nri ọ bụla.
Dị ka a ọkachamara emeputa maka otu-eji ọ drinkingụ cupsụ iko na nri akpa ihe karịrị afọ 13, anyị nwere dị iche iche nha nke PLA òkè iko, PLA ice ude iko, PLA ọ cupsụ cupsụ iko, U ụdị PLA iko, deli cup / akpa, PLA nnukwu efere na lids maka ha niile. Anyị PLA oyi iko bụ ndị zuru okè nnọchi maka omenala plastic iko dị ka anyị iko bụ 100% compostable na biodegradable.
Dị ka a ọkachamara emeputa maka otu-eji ọ drinkingụ cupsụ iko na nri akpa ihe karịrị afọ 13, anyị nwere dị iche iche nha nke PLA òkè iko, PLA ice ude iko, PLA ọ cupsụ cupsụ iko, U ụdị PLA iko, deli cup / akpa, PLA nnukwu efere na lids maka ha niile. Anyị PLA oyi iko bụ ndị zuru okè nnọchi maka omenala plastic iko dị ka anyị iko bụ 100% compostable na biodegradable. Ihe anyị ji eme ihe bụ onye ezinaụlọ polyester, ihe izizi zuru ezu ma zụta ya n'ime ọka
Dị ka a ọkachamara emeputa maka otu-eji ọ drinkingụ cupsụ iko na nri akpa ihe karịrị afọ 13, anyị nwere dị iche iche nha nke PLA òkè iko, PLA ice ude iko, PLA ọ cupsụ cupsụ iko, U ụdị PLA iko, deli cup / akpa, PLA nnukwu efere na lids maka ha niile.
100% Compostable na biodegradable dog poop akpa bụ ihe ga - enwerịrị ihe maka ndị hụrụ anụ ụlọ niile. Ọ dị obere ma dị mma iji metụ aka, yabụ ị nwere ike were ya mgbe ị na-ejegharị nkịta gị. Ọ naghị ehi ehi ma nwee nnukwu ume ike, yabụ ị nwere ike ilekọta mkpa niile nke nkịta gị ma hapụ obodo gị dị ọcha ma nwee obi ụtọ n'anya gị. Mee ka nkịta gị nwee obi ụtọ na obodo gị dị ọcha na akpa nkịta anyị.
Ihe nkiri a bụ nke PLA, nke na-anaghị egbu egbu na mmadụ na gburugburu ebe obibi. Ọ na-agbadata kpamkpam na mmiri na carbon dioxide n'okpuru ọnọdụ compostable na ọnwa 6, yabụ ihe a nwere mmekọrịta enyi na enyi ma nyere gị aka ichedo gburugburu ebe obibi ma belata mmetọ. Ọ nwere ezigbo ike, nrụgide siri ike, njigide akara, enweghị ụcha na ụdị nkwụsị.
123 Osote> >> Peeji 1/3
8lọ 810, Nke 1958, North Zhongshan Road, Putuo District, Shanghai, China, 200063
Ntinye aka na Naturepoly guzobere Luna ab ...
Ego ole ka anyị “na-eri” ...
Eziokwu Banyere Pụrụ Igbu Plastic